Umkhakha Wemikhiqizo | Abakhiqizi bemikhiqizo baseChina, abahlinzeki
I-Gel & Clot activator Tube
I-EDTAK2 / EDTAK3
Ububanzi besicelo: Lo mkhiqizo uvikela ukuqoqwa, ukuthuthwa kanye nokugcinwa kwamasampula wegciwane. Imiyalo esetshenzisiwe: 1. Ngaphambi kokuthatha isampula, phawula imininingwane yesampula efanele kwilebula ye-sampling tube. 2. Sebenzisa isampulu yesampula ukwenza isampula ku-nasopharynx kuze kube ngezidingo ezahlukahlukene zokusampula. 3. Izindlela zokusampula zingezansi: a. I-Nasal swab: Faka kancane ikhanda le-swab ku-condyle yamakhala yendawo yamakhala, hlala isikhashana bese uyikhipha kancane, i ...
I-EDTA iyi-aminopolycarboxylic acid kanye ne-chelating agent eyihlela kahle i-calcium ion egazini. "I -calated calcium" isusa i-calcium kusayithi yokusabela futhi imise ukuhlangana kwegazi okuvela kude noma ngaphandle. Uma kuqhathaniswa namanye ama-coagulants, umthelela wawo ekuhlanganisweni kwamaseli wegazi kanye ne-morphology yeseli yegazi incane. Ngakho-ke, usawoti we-EDTA (2K, 3K) uvame ukusetshenziswa njengama-coagulants ekuhlolweni kwegazi okujwayelekile. Usawoti we-EDTA awusetshenziswanga ekuhlolweni okuthile okufana nokwenziwa ngegazi, izinto zokulandela umkhondo kanye ne-PCR.
I-Coagulant ifakwe odongeni lwangaphakathi lweshubhu lokuqoqa igazi, isheshise ukuqina kwegazi futhi inciphise isikhathi sokuhlolwa. I-Tube iqukethe i-gel yokuhlukanisa, ehlukanisa ngokuphelele isakhi segazi segazi (i-serum) engxenyeni eqinile (amaseli egazi) futhi ihlanganisa zombili izakhi ngaphakathi kweshubhu enomgoqo. Umkhiqizo ungasetshenziselwa izivivinyo ze-biochemistry zegazi (umsebenzi wesibindi, umsebenzi wezinso, umsebenzi we-myocardial enzyme, umsebenzi we-amylase, njll), ukuhlolwa kwe-serum electrolyte (i-serum potassium, i-sodium, chloride, i-calcium, i-phosphate, njll), umsebenzi we-thyroid , i-serum immunology, ukuhlolwa kwezidakamizwa, njll.
I-coagulation tube ingezwa nge-coagulant, isebenzisa i-thrombin futhi iguqula i-fibrinogen encibilikayo ibe yipolymer ye-non-soluble fibrin, eqhubeka iba yi-fibrin aggregates. I-coagulation tube isetshenziselwa ukuhlaziywa okusheshayo kwe-biochemical esimweni esiphuthumayo. Ishubhu lethu le-coagulation liqukethe i-glucose stabilizer futhi ithathe indawo ye-glucose anti-coagulation tube yendabuko. Ngakho-ke, alikho i-ejenti elwa nokugqoza okufana ne-sodium fluoride / potassium oxalate noma i-sodium fluoride / heparin sodium edingekayo ekuhlolweni kwe-glucose yegazi nokukhuthazela kweglucose.
I-Serum tube ihlukanisa i-serum ngenqubo evamile yokuhlangana kwegazi kanye ne-serum ingaphinde isetshenziswe ngemuva kokukhipha isenti. I-Serum tube isetshenziswa ikakhulukazi ekuhlolweni kwe-serum njengokuhlaziywa kwe-serum biochemical (umsebenzi wesibindi, umsebenzi wezinso, ama-enzymes e-myocardial, amylase, njll.), Ukuhlaziywa kwe-electrolyte (i-serum potassium, i-sodium, chloride, calcium, phosphorus, njll.), Umsebenzi we-thyroid, Ingculaza, umaka wamathumbu kanye ne-serology, ukuhlolwa kwezidakamizwa, njll.
Ama-Micro Igazi Wokuqoqwa Kwegazi
Amashubhu wokuqoqa igazi amancane: alungele ukuqoqwa kwegazi ezinganeni ezisanda kuzalwa, ezinsaneni, ezigulini ezihluleka ezingxenyeni ezinakekela abaguli, kanye neziguli ezivuthayo ezingakulungele ukuqoqwa kwegazi venous. Ishubhu lokuqoqa igazi elincane liyinhlangano yokucindezela engeyona engemihle, futhi indlela yokusebenza kwayo ihambelana ne-vacuum yegazi yokuqoqa umbala ofanayo.
IHeparin Sodium / Lithium Tube
Udonga lwangaphakathi lweshubhu lokuqoqa igazi lufafazwa ngokufana nge-heparin sodium noma i-lithium heparin, engasebenza ngokushesha kumasampula egazi, ukuze iplasma esezingeni eliphakeme itholakale ngokushesha. Ngaphezu kwezici ze-heparin sodium, i-lithium heparin futhi ayinakho ukuphazamiseka kuyo yonke i-ion kufaka phakathi i-ion sodium, ngakho-ke nayo ingasetshenziselwa ukutholwa kwezinto ezilandelwayo.
I-gluluose ishubhu isetshenziswa ekuqoqweni kwegazi ukuhlolwa okufana noshukela wegazi, ukubekezelela ushukela, i-erythrocyte electrophoresis, anti-alkali hemoglobin ne-lactate. I-Sodium Fluoride engeziwe ivimbela ngempumelelo ukusebenza kwe-metabolism kashukela wegazi futhi i-Sodium Heparin ixazulula ngempumelelo i-hemolysis. Ngakho-ke, isimo sokuqala segazi sizohlala isikhathi eside futhi siqinisekise idatha yokuhlola ezinzile ushukela wegazi kungakapheli amahora angama-72. Okokungezela ongakukhetha yi-Sodium Fluoride + Sodium Heparin, Sodium Fluoride + EDTA.K2, Sodium Fluoride + EDTA.Na2.
I-Nucleic Acid Test Tube
Iphepha elimhlophe lokuphepha libonisa ukuthi i-gel yokuhlukanisa igazi ne-EDTA-K2 yengezwe kwi-tube. Ngemuva kokwelashwa okukhethekile i-enzyme ye-DNA, i-enzyme ye-RNA esibonelweni ingasuswa yi-Co 60 irradiation sterilization ukuqinisekisa ukuqina komkhiqizo kwi-test test. Ngenxa yokungezelelwa kwe-gel yokuhlukanisa nodonga lwe-tube enobudlelwano obuhle, ngemuva kwe-centrifuge, i-glue yokuhlukanisa inert ingahlukanisa ngokuphelele ukwakheka kwe-liquid kanye nezingxenye eziqinile egazini futhi iqoqe ngokuphelele isithiyo maphakathi ne-tube ukuya gcina ukuqina kwezimodeli ngokumelana nokushisa nokuqina.
Iqoqo le-sodium citrate liyi-3.8%. Isilinganiso sevolumu ye-anticoagulant vs. igazi l: 4. Ngokuvamile kusetshenziselwa ukuhlolwa kwe-sedimentation test. Umthamo ophakeme we-anticoagulant uxolisa igazi futhi ngenxa yalokho, likhuphula izinga lokudonswa kwegazi. Ngenxa yomthamo omncane kanye nengcindezi engemihle ngaphakathi kweshubhu, idinga isikhathi esithile sokuqoqwa kwegazi. Linda ngesineke kuze kube yilapho igazi liyeka ukungena ku-tube.
I-Sodium citrate isebenza njenge-anti-coagulant nge-chelation nge-calcium egazini. Ukugxila kwe-sodium citrate kungu-3,2% kanti isilinganiso se-anti-coagulant vs. segazi l: 9. Isetshenziselwa ikakhulukazi isivivinyo se-coagulation (isikhathi se-prothrombin, isikhathi se-thrombin, isikhathi esisebenzayo se-thromboplastin, i-fibrinogen). Isilinganiso sokuxuba yingxenye eyodwa ye-citrate ezingxenyeni eziyi-9 zegazi.
Izinaliti Zokuqoqa Igazi Butterfly
Ngokuya ngohlobo lokuxhuma, inaliti eqoqayo yegazi elinobuthi ingafakwa kuhlobo lwePen-hlobo nezinaliti zegazi ezixhunywayo ezithambile. Izinaliti Butterfly yinkosi izinaliti ezithinta igazi-ezithambile. Inaliti yokuqoqa igazi esetshenziselwa ukuqoqa amasampula egazi ngesikhathi sokuhlolwa kwezokwelapha yakhiwa ngenaliti nangomgqomo wenalithi.